कोरोनाबाट बच्न मास्क अनिवार्य तर गुणस्तर खै ? (भिडियो रिपोर्टसहित) – Himalaya Television
कोरोनाबाट बच्न मास्क अनिवार्य तर गुणस्तर खै ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
२०७८ असोज १ गते १८:०२
१ असोज २०७८ काठमाडौं । कोरोना संक्रमण शुरु भएसँगै मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ । अनि यसको गुणस्तरको विषयमा पनि छलफल शुरु भएको छ । तर मास्क प्रयोगकर्ताले गुणस्तरमा भने ध्यान दिएका छैनन् । सरकारले पनि चासो लिएको छैन ।
कोरोना कहरका कारण मास्क साथी जस्तै बनेको छ । कोरोना संक्रमणबाट बच्न मास्कको प्रयोग एउटा उपयुक्त माध्यम भएकाले पनि विज्ञले मास्कको प्रयोग गर्न सुझाएका छन् ।
विज्ञहरुको सुझावसँगै नागरिकले पनि मास्क प्रयोगलाई अनिवार्य गरेका छन् । तर उनीहरुले गुणस्तरीय मास्क सही तरिकाले लगाए मात्र कोरोनाबाट जोगिन भन्ने बुझ्न बाँकी छ । त्यसैले नागरिकले मास्कको गुणस्तरमा ध्यान दिएको पाइँदैन ।
नागरिकले ध्यान नदिएको जस्तै, सरकारले पनि मास्कको गुणस्तरको विषयमा चासो लिएको देखिँदैन । कोरोना संक्रमण बढेर मास्कको माग बढ्न थालेपछि मास्क उद्योगको संख्या पनि बढेको छ ।
तर अहिलेसम्म नेपालका चार वटा उद्योग मात्र ‘मैँले उत्पादन गरेको मास्क गुणस्तरीय छ मलाई गुणस्तरको प्रमाण पत्र दिनुहोस्’ भनेर नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पुगेका छन् । जसमध्ये एउटाले मात्र गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेको छ ।
कोरोना कहर शुरु भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । योसँगै मास्कको अनिवार्य प्रयोगलाई सरकारले जोड दिएको छ । सरकारले मास्क खै ? अभियान नै सञ्चालन गरेर मास्क लगाउन नागरिकलाई प्रेरित गरिरहेको छ ।
तर गुणस्तरीय मास्क प्रयोगमा भने राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । एन नाइन्टी फाइभ मास्कलाई गुणस्तरीय मास्क भनिए पनि, दैनिक प्रयोगको लागि सर्जिकल मास्कलाई नै उपयुक्त मानिएको छ । संक्रामक रोग विज्ञहरु मास्क लगाएर मात्रै नहुने र गुणस्तरीय मास्क लगाउनुपर्ने बताउछन् ।
मास्कको प्रयोग बढेसँगै देशका विभिन्न ठाउँमा मास्क उत्पादन गर्ने उद्योग खुलेका छन् । ती मास्क उत्पादक कम्पनीबाट दैनिक हजारौं मास्क विक्री वितरण हुन्छन् । तर मास्कको गुणस्तरको विषयमा राज्यले ध्यान दिन नसक्दा, नागरिक नाम मात्रको मास्क लगाएर ढुक्कसँग हिंडिरहेका छन् ।
कोरोना गुणस्तर मास्क